Erduqaan oo raba dastuur cusub oo Turkigu yeesho muxuu niyada ku hayaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Erduqaan oo raba dastuur cusub oo Turkigu yeesho muxuu niyada ku hayaa
Madaxweynaha Turkiga oo la hadlay saxaafada dalkaasi ayaa sheegay in dalkiisu u baahan yahay dastuur cusub ayna isla garteen xisbiga hadda dan wadaagta yihiin ee wadaniyiinta. Waxaad is weydiin kartaa waxa Erduqaan xilligan oo uu fadhiyay dalka 18 sano uu rabo inuu bedelo.
”Waxa dastuurka cusub ee aan lsla qaadanay wax ka bedelayaa dhaqaalaha iyo cadaalada oo labaduba hada ku dhisan RIBO waa dhaqaalahee iyo cadaalado oo aan ku salaysney shareecada ayuu yiri Xuseen Warsame.
”Waxaan dhawaan shaacin doonaa nooca dastuur ee aan rabno iyo meelaha ay ku jiraan dhaqaalaha iyo cadaalada oo aan dib u habayn ku samayn doono ayuu yiri Erduqaan oo lagu xasuusto mudada uu xilka hayay inuu Turkiga ka dhigey quwad ku taala gobolka.
Inkastoo lagu canaantey dagaalada aan dhamaanayn ee uu ka wado Suuriya iyo Liibiya.